Uma uphuthuma, ungafuni ukuchitha isikhathi ukusesha ngomzuzu ngoba impahla yabo yonke. Nanka amathiphu ambalwa sendlela isikhathi sokuma kwezokuzilibazisa ngifuna izinto elahlekile.
Esinye sezizathu ukuthi abantu baphelelwa, wukuthi izinto akudingeki endaweni ekhethekile endlini. Ukuze hhayi ukulahlekelwa izinkinobho noma isikhwama, khetha indawo ekhethekile lapho izohamba isihloko nsuku zonke lapho ufika ekhaya. Kungaba ubhasikidi ephasishi noma hook komnyango. Lapho kuba umkhuba, uzoba wazi kahle lapho ukuba sibheke lokhu noma ukuthi isihloko. Amanye amalungu omndeni bese futhi wasebenzisa ukusebenzisa lesi sikhala esabiwe. Futhi uma ukuthola izinto ezithile ngale isikhala osinikiwe ngabo, bayobuyela endaweni yabo. EKhethekile - siyindlela elula, kodwa ngempumelelo kakhulu okuthola izinto zangamalanga.
I ezimbalwa izinto ezithile ezingadingekile ekhaya lakho, kancane kuyoba "yokukhosela" ukufelwa izinto ezithile. Uma unamathela oda endlini, uyobe kalula ukuthole iyiphi into ukuthi alikho endaweni efanele. Ukunciphisa yinqwaba amaphepha, iqoqo lezinto okungalungile, okufana amathoyizi noma zasehhovisi - konke okuyizinto ekunciphiseni isikhathi kudingeka afune izinto ezingekho kuso.
Ukuphimisa izenzo zakhe
Uma ushonelwe into oyifunayo, bese, ukuze avuselele inkumbulo esesimweni sokungaphili ngokuphelele noma ulwazi olumayelana nokuthi ukuphi akubeka, uyacelwa ukuba wenze ngokwakho isikhumbuzi, noma beveza ubudlelwane nale ndawo. Ngokuzayo oyifunayo le nto, ikakhulukazi uma endaweni yakhe yesikhashana, nale isikhumbuzi uyokwazi ukukhumbula ncamashi nguye lapho.
Ungafaki ifoni yakho Imodi ethule
Akukho lutho mubi kuka ukukhohlwa lapho ugcine efonini yakho. Indlela elula ukuyithola - ukushayela inombolo yakho kusuka kwenye inombolo. Kodwa uma ifoni isethwe ku Imodi ethule ke lelisu cishe engenamsebenzi. Isiphetho: ungalokothi cisha umsindo. Lo mqondo futhi kusebenza ezinye izinto. Ngokwesibonelo, ukuthenga a chain key nge charm - ngakho kuyoba lula ukuthola. Ukuze uthole ngokushesha izincwadi ezibalulekile bangase bakwamukele ifolda yefayela elikhanyayo lapho zigcinwa. Nge-alamu ezwakalayo futhi ezibukwayo, ungakwazi ngokushesha ukuthola izinto alahlekile.
Sebenzisa ubuchwepheshe obuhlukahlukene
Manje, kukhona ezinye izinhlelo ezinkulu ezisisiza lokhozi izinto zethu. Ukusebenzisa-earphone ekhethekile i-Bluetooth, ehambisana izinto ezithile, ungakwazi kalula ugcine ithrekhi izinto elahlekile, kodwa ngaphansi kombandela owodwa - kufanele sisekele lesi sici. Uma ulahlekelwa element ndawonye ngama-earphone, ungathola kumephu, ngisho ukubiza lapho uya eduze. Kukhona inguqulo entsha. izinhlelo yokusesha abahlukahlukene, kuhlanganise isicelo "Thola ifoni" ongayisebenzisa kukhompyutha yakho.
Udinga ukugxila ngale ndaba
Lapho senza babefuna okuthile, uqala ukwethuka ayeke ukucabanga. Inkinga iba nathi, hhayi into ukuthi sifunani. Ukuze aphumelele ekutholeni izinto elahlekile, kudingeka uhlale phansi ucabange kahle. Kwazi bani, mhlawumbe wena uzokhumbula lapho ubeka into.
Khumbulani izinto ezintathu eziyinhloko: induduzo, ukuzola, ukuzethemba
Ukuze uthole ngokushesha into udinga ukuqala ukuzola abstract ngokuphelele kuzo zonke izinkinga ukuphokophela, ngoba kuphela isimo esinokuthula kwengqondo futhi ingqondo kuzokusiza yinto enzima kangaka. Okubaluleke kakhulu - akukho ukwethuka, ngoba uma uthola sezinzwa futhi uthukuthele, ungatholi ukugxila ezibalulekile. Hlala phansi, ukuthatha umoya ambalwa ezijulile, ukuzola, cabanga. inkomishi aqabulayo itiye kuzoba nje isikhathi. Ekugcineni, ukuze sithole into elahlekile, kufanele zokwethemba ngamakhono akho. Ngaphandle kwayo, wena lula kakhulu ukuba ubuyela kumodi ukukhungatheka.
Uma unalo elikhanyayo, futhi ikhanda lakho akuyona avimbekile nge umbhedo ezihlukile, bese ukucinga kuyoba lula kakhulu. Hlela indlela uyobheka isihloko sakho. Kunalokho yokudlala izinto uyahlanya ngapha nangapha, uqalaza egumbini ikamelo, kusukela isikhundla lokugcina, owawuke esetshenziselwa isitoreji tesifundvo. Futhi, qiniseka ukuhlola lapho kufanele kube indawo kwi-subject (isibonelo, isembatho sakho kwi isiphanyeko zokugqoka, isambulela yakho othini). Azame ukuthola zonke izinyathelo zayo kusukela okokugcina oyibonile le nto. Musa ukuchitha isikhathi ukuzama ukubheka kulezo zindawo, lapho, njengoba wazi, ke ngeke.
Zama ukuphindisela izinto endaweni
Mhlawumbe ulahlekelwe encwadi abakufunde, bese ukhohlwe ukubuyela eshalofini. Mhlawumbe cat wangqongqoza ipeni zakho ozithandayo, futhi iphuma ngaphansi usofa. Ithiphu: kahle futhi ngokucophelela hlola indawo lapho ngokuvamile walala into oyifunayo, futhi ngokucophelela nokuhlola indawo kulendawo ukubona lapho angase alale into elahlekile. Ukulahleka into kungaba umcimbi kubangela ukwethuka, kodwa uma ukuqoqa imicabango yakhe futhi ngehlise bese elandela lolohlelo esungulwe, wena zisindise ukucindezeleka futhi sikwazi ukuthola kalula into oyifunayo.
Alexei Morozov, umlingisi: Biography, umndeni kanye Filmography